मोबाइल लोकेसनमा रोशनीको कोठामा देखिँदैनन् महरा डिएनए परीक्षण कति आवश्यक?
नेपाल लाइभ मंगलबार, असोज २८, २०७६, १८:५२
काठमाडौं- संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार प्रयासको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा अहिले प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा छन्।
बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै शाहीले महराविरुद्ध महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँबानेश्वरमा किटानी जोहरी दिएपछि प्रहरीले महरालाई सभामुख निवास बालुवाटारबाटै असोज १९ गते पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा रहेका महराको स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उनलाई मंगलबार अदालतमा उपस्थित गराएपछि पुनः नर्भिकमा नै लगिएको छ।
अस्पतालबाटै मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौं पुर्‍याइएका महरालाई लागेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न अदालतले १३ दिनको म्याद दिएको छ। यसअघि १० दिन हिरासत बसिसकेकाले उनलाई अब थप ३ दिनसम्म अनुसन्धान गरेर प्रहरीले मुद्दा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ वा पुनः म्याद थपका लागि अदालत पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। बलात्कार प्रयास कसुरमा बढीमा २५ दिनसम्म प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ।
यसबीचमा प्रहरीले महरामाथिको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। घटनास्थलमा फेला परेका रक्सीका बोतल, चस्माको टुक्रा, जुत्ताको तलुवा, गिलासजस्ता कुराको प्रहरीले फेरेन्सिक जाँच गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै प्रहरीले महराको कल डिटेलदेखि रोशनीको कोठामा गएको भनिएको दिनको कल लोकेसन केलाइसकेको छ।
प्रहरीले केलाएको कल लोकेसनलाई मात्र आधार मान्ने हो भने निवर्तमान सभामुख महरा रोशनीको कोठामा पुगेको देखिँदैन। तर अन्य प्रमाणबाट भने उनी रोशनीको कोठामा उपस्थित भएको देखिइसकेको छ। महराको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले महराको कल लोकेसन हेर्‍यौं। तर उनी रोशनीको कोठामा भएको देखिँदैन। अन्य प्रमाणबाट भने उनी रोशनीको कोठामा पुगेको देखिन्छ।’
महरा रोशनीको कोठामा गएको मोबाइलको लोकेसनमा नदेखिनुमा उनले मोबाइल 'स्विच अफ' गरेको वा त्यस समयमा फोन नआएको हुनुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ। लामो समयसम्म फोन नआएको अवस्थामा मोबाइलबाट त्यस ठाउँको लोकेसन ट्र्याक हुँदैन।
मोबाइलबाट ट्र्याक हुने लोकेसनबाहेक अन्य प्रमाणबाट भने महरा रोशनीको कोठामा पुगेको प्रष्ट हुन्छ। रोशनीको कोठमा गएको कुरा महरा स्वयंले पनि स्वीकारिसकेका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले पनि महरा रोशनीको कोठमा पुगेको देखिएको नेपाल लाइभलाई बताएका छन्। महराको भनाई उद्धृत गर्दै ती प्रहरीले भने, ‘रोशनीसँग मेरो पारिवारिक सम्बन्ध थियो। पारिवारिक सम्बन्धकै कारण उनको कोठामा गएको हुँ।’यद्यपि, अन्य कुरा भने महराले अस्वीकार गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले रोशनीका श्रीमानको समेत मोबाइल लोकेसन केलाएको थियो। उनी भनी भने त्यस दिन काठमाडौंमा नै देखिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। तर रोशनीका श्रीमानले भने त्यस दिन आफू बुटवल भएको दाबी गरेका थिए।
छोराको गाडी लिएर रोशनीको कोठामा
बा २० च ५७११ नम्बरको रातो नम्बरप्लेट भएको निजी कारमा महरा रोशनीको कोठामा पुगेका थिए। उक्त गाडी उनको छोराको भएको प्रहरीले जनाएको छ। महरासँगै उनका पिएसओ नेपाली सेनाका एक, सेनाकै एक चालक र एक प्रहरी पनि गएका थिए।
महराको गाडी त्यसबेला साँझ ६ बजेर ७ मिनेटमा तीनकुनेस्थित रोशनीको कोठाअघि पुगेको सिसीटिभी फुटेजबाट देखिइसकेको छ। त्यसपछि महराले चालक र पिएसओलाई आधा घण्टामा आउँछु भनेर रोशनीको कोठातर्फ लागेको बयान पिएसओहरूले प्रहरीलाई दिइसकेका छन्।
महराले आफ्नो छोरासँग ‘गाडी ले! राँ...ले बोलाई। म गएर आउँछु,’ भनेर छोरोको गाडी लिएर रोशनीको कोठामा गएको अनुसन्धानबाट खुलेको एक प्रहरी अधिकारीले जनाए। यसरी छोराको गाडी लिएर रोशनीको कोठमा पुगेका महरा त्यहाँबाट ७ बजेर ४० मिनेटमा निस्किसकेको देखिएको छ।
महरा रोशनीको कोठामा जाँदा आउँदाको सिसीटिभी फुटेज प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हेरेपछि पक्राउका लागि ग्रिन सिग्नल दिएका थिए।
डिएनए कति आवश्यक?
प्रहरीले महराको डिएनए परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। महरा रोशनीको कोठामा गएका हो कि होइनन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न चस्माको टुक्रा, जुत्ताको तलुवामा हुन सक्ने डिएनए र महराको डिएनए म्याच गराउन डिएनए गर्न लागिएको प्रहरीको भनाइ छ।
तर सिसिटिभी फुटेज, पीडित भनिएकी युवतीको बयान, महराले पठाएका म्यासेज, पिएसओको बयान र महरा स्वयमले नै रोशनीको कोठामा गएको भन्ने स्वीकारी सकेको अवस्थामा महराको डिएनए आवश्यक नरहेको अनुसन्धानविज्ञले जनाएका छन्। लामो समयसम्म चस्माको टुक्रा र जुत्तामा तलुवामा रहेको भनिएको डिएनए 'कन्टामिनेटेड' भइसकेको हुन सक्ने र यतिखेर डिएनए परीक्षण गर्दा महरासँग नमिल्न सक्ने भएकाले डिएनए परीक्षणकै कारण उनी छुट्न सक्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने अनुसन्धानविज्ञ बताउँछन्।
अर्कोतर्फ चस्मा र जुत्ताको तलुवाको डिएनएले बलात्कार प्रयास भएको पुष्टि हुन नसक्ने भएकाले महराको डिएनएको औचित्य नरहेको अनुसन्धानविज्ञ तथा पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्।
रक्सीको बोतल, चस्माको टुक्रा र जुत्ताको तलुवा अन्य व्यक्तिले समेत चलाइसकेकाले डिएनएको नतिजा सही आउन नसक्ने बताइन्छ।
यसअघिका केसमा पनि डिएनए नमिलेका कारण प्रहरीले अपराधी दाबी गरेका व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएका घटना भएकाले महराको केसमा पनि डिएनए परीक्षणकै कारण दोषीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने प्रहरी अधिकारीकै भनाइ छ।